Matevina Acrylic Sheet
Fahadiovana Acrylic Sheet
Anti-Mamirapiratra mankarary maso izany Acrylic Sheet
Anti-voasakantsakan'ny Acrylic Sheet
Mamiratra Acrylic Sheet
Marbra Acrylic Sheet
Voahangy Acrylic Sheet
lehibe Acrylic Tube
Manolana hevi-Acrylic Rod
nanary lamba atrikasa
extrusion taratasy atrikasa
Ny orinasa dia nampiditra mpitarika izao tontolo izao fanariana mandeha ho azy sy ny extrusion acrylic pamokarana sy ny Britanika "British Pilkington Glass" fitaratra bobongolo. Kingsign dia manana tantara ny 15 taona eo amin'ny sehatry ny acrylic, ary efa miorina any amin'ny avo-end biraom-fanariana ny famokarana sy ny fitaovana miaraka mandroso Taiwan pamokarana. Izany mandany ny MMA monomer nomen'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny orinasa malaza no polymerized ny hafanana avo-fanariana dingana. Amin'ny laza tsara, dia tia avo malaza ao amin'ny orinasa. Ny orinasa dia nikatsaka fanavaozana sy ny fanatsarana mitohy.
Tamin'ny 2016, Kingsign Acrylic nampidirina avo-dehibe efatra farany biraom-extrusion famokarana andalana (roa nandroso Italiana famokarana tsipika sy dehibe roa Toshiba famokarana tsipika), ary tsy miankina ao an-toerana nivoatra ka namokatra avo-end extrusion takelaka. Ny famokarana extrusion takelaka mandany bala PMMA nomen'ny orinasa eran-malaza. Ny vokatra dia mifototra amin'ny tsena tinady ny avo-tsara acrylic hazavana mpitari-dalana amin'ny takela an-toerana sy tany ivelany. Amin'ny laza tsara sy akaiky ny tsena varotra rafitra fanompoana, ny orinasa ihany koa ny mankafy avo malaza eo amin'ny sehatry ny acrylic hazavana mpitari-dalana amin 'ny takelaka. Ny vokatra manana tsena tsara sy avo lenta ny marika laza, ary ny mpanjifa amin'ny tarehy eo an-toerana sy any ivelany, ary naondrana any Eoropa, Amerika, Azia Atsimo sy ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Miorina amin'ny kalitao sy mafy orina fampisehoana avo, Kingsign Acrylic taratasy efa nahazo tsara tsena nandritra ny taona maro.
Kingsign Acrylic dia misahana manokana ny orinasa matihanina amin'ny fanamboarana sy ny fivarotana ny acrylic fanitso, fantsona sy ny hazo izy. Ny orinasa dia niala Shanghai Anting Industrial Park ho Jiangsu Province. Ny orinasa manarona ny faritra 60.000 metatra toradroa isan-taona ary manana fahaiza famokarana ny 20.000 taonina. Efa nanorina orinasa ao Hong Kong, Shanghai, sy ny Etazonia, ary Shanghai manana birao miandraikitra ny varotra sy ny varotra eran-;
Toy ny mahazatra, Kingsign acrylic dia manohy miasa niakatra ho any amin'ny raharaham-barotra fitsipiky ny orinasa "Quality Tonga Voalohany, Mpanjifa no-tendrony ambony indrindra", ary manolo-tena mba hiara-miasa amin-kitsimpo, mpanamboatra antsakany sy andavany, ary nirehitra hanatsara mandrakariva lalana vaovao foana.
Clear Round Acrylic Rod, Black Acrylic Rod, Acrylic Guide tsorakazo , lehibe Acrylic Tube , Plastic Round Tube , Mafy orina Clear Acrylic Rod,